KG to Year 10
KG မှစ၍ G10 အထိ အခြေခံပညာရေး လမ်းညွှန်ချက်တွေကို သက်ဆိုင်ရာ အတန်းလိုက် လင့်လေးတွေ ချိတ်ပေးထားပါတယ်။ မိမိတို့ ကလေးနှင့်အတူ မိဘများက လုပ်ပေးရမှာလေးတွေကို လမ်းညွှန်ပေးထားတာပါ။ ယခု လမ်းညွှန်ချက်ကို ပြုစုပေးတဲ့ ဆရာမရဲ့ မူရင်းပို့စ်ကိုလည်း အောက်ဆုံးမှာ ထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
အခြေခံပညာရေးက ကလေးတွေအတွက် ဒီကာလမှာ လုပ်ပေးလို့ရတဲ့ အရာတွေကို အကြံပေးချင်ပါတယ် ။
ဒီအကြံပေးချက်က ငွေကြေးမတတ်နိုင်တဲ့မိဘတွေအတွက် အဓိက
ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒီကာလမှာ အစစအရာရာ အဆင်မပြေကြလို့
ကလေးပညာရေးအတွက် ဘာသာစကားတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ဘာသာရပ်တစ်ခုခု သင်တန်းအပ်ပေးဖို့က
စဉ်းစားနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဆို အောက်ပါအချက်တွေကိုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ KG ကနေ Grade(11) အထိ အတန်းလိုက်အတွက် နေ့စဉ်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ ကျွန်မက အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ဆရာမဖြစ်ပေမယ့် အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်အတွက်သီးသန့်ပြောပြပေးသွားမှာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာရပ်အလိုက် ခြုံငုံပြီး မိဘတွေအတွက် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးတွေကိုပါ ထည့်သွင်းအကြံပေးသွားမှာပါ။
1. KG တန်း (သူငယ်တန်း)
KG တန်း ကလေးတွေမှာ preschool ( မူကြို ) တက်ထားတဲ့ ကလေးနဲ့ မူကြိုမတက်ပဲ KG တန်း တန်းတက်စေမယ့် ကလေးဆိုပြီး ၂မျိုးရှိပါမယ်။ Preschool တက်ထားတဲ့ကလေးတွေအတွက်ကတော့ သူတို့သိထားပြီးထားအကြောင်းအရာတွေကို မိဘက ပြန်မှတ်မိအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ ဥပမာ အရောင်ခွဲခြားတာမျိုး ပစ္စည်း အခေါ်အဝေါ်တွေအတူလေ့ကျင့်စေတာမျိုး
KG တန်း တက်မယ့်ကလေးတွေကတော့ သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့အခါ စာအရင်သင်တာမျိုးမလုပ်ပဲ ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် စာရိတ္တနဲ့ပတ်သတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် စာအုပ်လေးတွေဖတ်ပြနိုင်ပါတယ်။ အိမ်တွင်းမှုနဲ့ပတ်သတ်တာလေးတွေ သူတို့လုပ်နိုင်သလောက် သင်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ ဒါကို Preschool တက်ပြီးသားကလေးတွေအတွက်လည်း လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။
အရေးကြီးတာက စာနောက်ကျမှာစိုးလို့ မိဘက သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံမရှိပဲ ကျောင်းစတက်မယ့် ကလေးငယ်ကို စာမသင်ကြားစေဖို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ က ခ တစ်လုံးကို ဘယ်နှစ်ခေါက် A B C D တစ်လုံးကို ဘယ်နှစ်ခေါက်ရေးစေတာမျိုး မလုပ်စေဖို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မိဘက သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံရှိသူ သင်ကြားရေးနည်းလမ်းတွေကို လေ့လာသိရှိထားသူဆိုရင် အဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းနဲ့သင်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါတောင် အပေါ်ယံသဘောတရားနဲ့ပဲ သင်ယူခိုင်းလို့ရပါမယ်။ Group Work (အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်မှု )တွေ Pair work ( ၂ယောက်တွဲလုပ်ဆောင်မှု) တွေမှာ လိုအပ်တာတွေရှိနိုင်တာကြောင့်ပါ။
ဒါ့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ရင် ကလေးကို ပိုက်ဆံလည်းမကုန်စေတဲ့ သစ်ပင်စိုက်တာတွေ အိမ်တွင်းမှုကို ကူညီလုပ်ဆောင်စေနိုင်တာတွေ ဗဟုသုတရစေမယ့်စာအုပ်လေးတွေဖတ်ပြတာတွေ ဂျုံလေးတွေနဲ့ အရုပ်လေးတွေလုပ်တာမျိုး သစ်ရွက်လေးတွေနဲ့ ပုံဖော်စေတာမျိုး ဆေးရောင်ချယ်ခြင်း အိုရီဂါမီစက္ကူရုပ်ခေါက်ခြင်း ပုံဆွဲခြင်း စတဲ့ နှစ်သက်မယ့်အရာလေးတွေကို ဦးစားပေးသင်ထားပေးစေချင်ပါတယ်။ KG တန်းအတွက် ဘာသာရပ် သီးသန့်ခွဲခြားထားတာမျိုးမရှိလို့ လေ့ကျင့်ချင်ရင်တော့ အပြင်မှာ စာအုပ်လေးတွေ မေးဝယ်ပြီး လေ့ကျင့်ပေးလို့ အဆင်ပြေရင်လည်း မိဘနဲ့အတူလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။ စာအုပ်နဲ့ မလေ့ကျင့်ရင်လည်း အထက်ပါအတိုင်းပဲ တခြားသင်ကြားစရာတွေကို လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ မိဘတိုင်းလုပ်ပေးနိုင်မယ့်အနေအထားတစ်ခုပါ။
နောက်ထပ်အကြံပေးချင်တာက ကျောင်းတက်မယ့်အချိန်မှာ ဘယ်အတန်းကစတက်သင့်သလဲဆိုတဲ့ အမေးများတဲ့မေးခွန်းအတွက်ပြောပြချင်ပါတယ်။ အရင်ကလည်း ဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြောဖူးပါတယ်။ အသက် ၅နှစ်ပြည့်ရင် KG တန်းစတက်လို့ရပါတယ်။ အသက် ၆နှစ်ဆိုရင်တော့ KG တန်းမထားရသေးရင်တောင် Grade(1) ပထမတန်းကို မိဘသဘောတူရင်တန်းထားလို့ရပါတယ်။ အသက်ရနှစ်ဆိုရင်တော့ Grade(2) ဒုတိယတန်းကို ကျော်ထားလို့ မရပါဘူး။ Grade(1) မှာ ပဲ တက်ရပါတယ်။ ကျောင်းမတက်ရသေးတဲ့အချိန်မှာ မိမိတို့ကလေးဟာ တက်ရမယ့်အတန်းထက် အသက်ကျော်နေတာမျိုးဖြစ်လို့ ဘယ်အတန်းထားရမလဲဆိုရင် မိမိတို့ကလေးအပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ် ။ ကလေးဟာ ကျောင်းပျော်တယ်။ ကျောင်းတက်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်။ သင်ကြားရေးမှာလဲပျော်တယ်။ သွက်လက်တယ်။ စတဲ့အချက်တွေရှိနေရင်တော့ KG တက်ရမယ့်ကလေးဟာ အသက်၆နှစ်ဖြစ်နေရင်တောင် Grade(1) ထားနိုင်ပါတယ်။ အထက်ပါအချက်တွေထဲက တစ်နည်းနည်းနဲ့ ငြိနေရင်တော့ KG က စထားတာပိုအဆင်ပြေပါတယ် ။ ကလေးက တက်ရမယ့်အတန်းထက် အသက်ကြီးနေရင် အများအားဖြင့်သင်ယူမြန်နိုင်ပါတယ်။ အထက်ပါအချက်တွေလည်း ပြည့်စုံပေမယ့် KG က စထားချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ ။ နေရာသစ် နယ်မြေအသစ်မှာ လူအသစ်တွေနဲ့ အသားကျအောင်နေတတ်လာမှာမို့ စိမ်းမနေတော့ပဲ KG က စလို့ အဆင်လိုက်အတန်းတက်သွားနိုင်ပါတယ်။
KG သင်ရိုးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိချင်တာရှိရင် အောက်ကလင့်တွေကို download ဆွဲပြီး ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ် ။ မေးချင်တာရှိရင် chat box က မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက်လိုင်းမရတဲ့မိဘတွေကိုလည်း ပြန်ဝေမျှပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
# အောက်က လင့် credit ပါ။
KG တန်း ဆရာလမ်းညွှန် စာအုပ်ကို လိုချင်သော ဆရာ ဆရာမ များနှင့် KG တန်းသားသားမီးမီးတို့၏ မိဘများအတွက် ကြည့်ရှုလေ့လာ ဖတ်ရှု သင်ကြားလိုပါက ဖုန်းနှင့် တက်ဘလက်မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါရန် pdf ဖိုင် အနေဖြင့် အောက်တွင်ပေးထားသော လင့်မှာ လိုချင်သော စာအုပ်များကို (download) ဒေါင်းလုတ်ဆွဲနိုင်ပါသည်
PDF READER ဖြင့်ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည် ။
Pdf reader.apk ဆွဲရန်
KG ကဗျာ ဘာသာစကား ပုံပြင် ဆရာကိုင် (၁) size.3.64 MB
KG သင်ပြမှုပုံစံ ဆရာလမ်းညွှန် (၂) size.4.31 MB
KG ဆရာ လမ်းညွှန် (3) size. 17.56 MB
Source: Ministry of Education Myanmar
Tr.Hanni Linn ❤
အေျခခံပညာေရးက ကေလးေတြအတြက္ ဒီကာလမွာ လုပ္ေပးလို႔ရတဲ့ အရာေတြကို အႀကံေပးခ်င္ပါတယ္ ။
ဒီအႀကံေပးခ်က္က ေငြေၾကးမတတ္နိုင္တဲ့မိဘေတြအတြက္ အဓိက
ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ဒီကာလမွာ အစစအရာရာ အဆင္မေျပၾကလို႔
ကေလးပညာေရးအတြက္ ဘာသာစကားတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ဘာသာရပ္တစ္ခုခု သင္တန္းအပ္ေပးဖို႔က
စဥ္းစားေနရတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးေတြဆို ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကိုလုပ္ေပးနိုင္ပါတယ္။ KG ကေန Grade(11) အထိ အတန္းလိုက္အတြက္ ေန႔စဥ္ေဖာ္ျပေပးသြားပါမယ္။ က်ြန္မက အဂၤလိပ္စာသင္တဲ့ဆရာမျဖစ္ေပမယ့္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္အတြက္သီးသန္႔ေျပာျပေပးသြားမွာမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာသာရပ္အလိုက္ ျခံဳငုံျပီး မိဘေတြအတြက္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ေလးေတြကိုပါ ထည့္သြင္းအႀကံေပးသြားမွာပါ။
1. KG တန္း (သူငယ္တန္း)
KG တန္း ကေလးေတြမွာ preschool ( မူႀကိဳ ) တက္ထားတဲ့ ကေလးနဲ႕ မူႀကိဳမတက္ပဲ KG တန္း တန္းတက္ေစမယ့္ ကေလးဆိုျပီး ၂မ်ိဳးရွိပါမယ္။ Preschool တက္ထားတဲ့ကေလးေတြအတြက္ကေတာ့ သူတို႔သိထားျပီးထားအေၾကာင္းအရာေတြကို မိဘက ျပန္မွတ္မိေအာင္ လုပ္ေပးနိုင္ပါတယ္ ။ ဥပမာ အေရာင္ခြဲျခားတာမ်ိဳး ပစၥည္း အေခၚအေ၀ၚေတြအတူေလ့က်င့္ေစတာမ်ိဳး
KG တန္း တက္မယ့္ကေလးေတြကေတာ့ သင္ၾကားေရးအေတြ႔အႀကံဳမရွိေသးတဲ့အခါ စာအရင္သင္တာမ်ိဳးမလုပ္ပဲ ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သတ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ စာရိတၱနဲ႕ပတ္သတ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ စာအုပ္ေလးေတြဖတ္ျပနိုင္ပါတယ္။ အိမ္တြင္းမႈနဲ႔ပတ္သတ္တာေလးေတြ သူတို႔လုပ္နိုင္သေလာက္ သင္ေပးနိုင္ပါတယ္ ။ ဒါကို Preschool တက္ျပီးသားကေလးေတြအတြက္လည္း လုပ္ေပးနိုင္ပါတယ္ ။
အေရးႀကီးတာက စာေနာက္က်မွာစိုးလို႔ မိဘက သင္ၾကားေရးအေတြ႕အႀကံဳမရွိပဲ ေက်ာင္းစတက္မယ့္ ကေလးငယ္ကို စာမသင္ၾကားေစဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။ ဥပမာ က ခ တစ္လံုးကို ဘယ္နွစ္ေခါက္ A B C D တစ္လုံးကို ဘယ္နွစ္ေခါက္ေရးေစတာမ်ိဳး မလုပ္ေစဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မိဘက သင္ၾကားေရးအေတြ႕အႀကံဳရွိသူ သင္ၾကားေရးနည္းလမ္းေတြကို ေလ့လာသိရွိထားသူဆိုရင္ အဆင္ေျပတဲ့နည္းလမ္းနဲ႕သင္ၾကားေပးနိုင္ပါတယ္။ ဒါေတာင္ အေပၚယံသေဘာတရားနဲ႔ပဲ သင္ယူခိုင္းလို႔ရပါမယ္။ Group Work (အဖြဲ႕လိုက္လုပ္ေဆာင္မႈ )ေတြ Pair work ( ၂ေယာက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈ) ေတြမွာ လိုအပ္တာေတြရွိနိုင္တာေၾကာင့္ပါ။
ဒါ့ေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္ရင္ ကေလးကို ပိုက္ဆံလည္းမကုန္ေစတဲ့ သစ္ပင္စိုက္တာေတြ အိမ္တြင္းမႈကို ကူညီလုပ္ေဆာင္ေစနိုင္တာေတြ ဗဟုသုတရေစမယ့္စာအုပ္ေလးေတြဖတ္ျပတာေတြ ဂ်ံဳေလးေတြနဲ႔ အရုပ္ေလးေတြလုပ္တာမ်ိဳး သစ္ရြက္ေလးေတြနဲ႔ ပံုေဖာ္ေစတာမ်ိဳး ေဆးေရာင္ခ်ယ္ျခင္း အိုရီဂါမီစကၠဴရုပ္ေခါက္ျခင္း ပံုဆြဲျခင္း စတဲ့ နွစ္သက္မယ့္အရာေလးေတြကို ဦးစားေပးသင္ထားေပးေစခ်င္ပါတယ္။ KG တန္းအတြက္ ဘာသာရပ္ သီးသန္႔ခြဲျခားထားတာမ်ိဳးမရွိလို႔ ေလ့က်င့္ခ်င္ရင္ေတာ့ အျပင္မွာ စာအုပ္ေလးေတြ ေမး၀ယ္ျပီး ေလ့က်င့္ေပးလို႔ အဆင္ေျပရင္လည္း မိဘနဲ႔အတူေလ့က်င့္နိုင္ပါတယ္။ စာအုပ္နဲ႕ မေလ့က်င့္ရင္လည္း အထက္ပါအတိုင္းပဲ တျခားသင္ၾကားစရာေတြကို လုပ္ေပးနိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ မိဘတိုင္းလုပ္ေပးနိုင္မယ့္အေနအထားတစ္ခုပါ။
ေနာက္ထပ္အႀကံေပးခ်င္တာက ေက်ာင္းတက္မယ့္အခ်ိန္မွာ ဘယ္အတန္းကစတက္သင့္သလဲဆိုတဲ့ အေမးမ်ားတဲ့ေမးခြန္းအတြက္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ အရင္ကလည္း ဒါနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ေျပာဖူးပါတယ္။ အသက္ ၅နွစ္ျပည့္ရင္ KG တန္းစတက္လို႔ရပါတယ္။ အသက္ ၆နွစ္ဆိုရင္ေတာ့ KG တန္းမထားရေသးရင္ေတာင္ Grade(1) ပထမတန္းကို မိဘသေဘာတူရင္တန္းထားလို႔ရပါတယ္။ အသက္၇နွစ္ဆိုရင္ေတာ့ Grade(2) ဒုတိယတန္းကို ေက်ာ္ထားလို႔ မရပါဘူး။ Grade(1) မွာ ပဲ တက္ရပါတယ္။ ေက်ာင္းမတက္ရေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ မိမိတို႔ကေလးဟာ တက္ရမယ့္အတန္းထက္ အသက္ေက်ာ္ေနတာမ်ိဳးျဖစ္လို႔ ဘယ္အတန္းထားရမလဲဆိုရင္ မိမိတို႔ကေလးအေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္ ။ ကေလးဟာ ေက်ာင္းေပ်ာ္တယ္။ ေက်ာင္းတက္တဲ့အေတြ႔အႀကံဳရွိတယ္။ သင္ျကားေရးမွာလဲေပ်ာ္တယ္။ သြက္လက္တယ္။ စတဲ့အခ်က္ေတြရွိေနရင္ေတာ့ KG တက္ရမယ့္ကေလးဟာ အသက္၆နွစ္ျဖစ္ေနရင္ေတာင္ Grade(1) ထားနိုင္ပါတယ္။ အထက္ပါအခ်က္ေတြထဲက တစ္နည္းနည္းနဲ႕ ျငိေနရင္ေတာ့ KG က စထားတာပိုအဆင္ေျပပါတယ္ ။ ကေလးက တက္ရမယ့္အတန္းထက္ အသက္ႀကီးေနရင္ အမ်ားအားျဖင့္သင္ယူျမန္နိုင္ပါတယ္။ အထက္ပါအခ်က္ေတြလည္း ျပည့္စံုေပမယ့္ KG က စထားခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့ ။ ေနရာသစ္ နယ္ေျမအသစ္မွာ လူအသစ္ေတြနဲ႔ အသားက်ေအာင္ေနတတ္လာမွာမို႔ စိမ္းမေနေတာ့ပဲ KG က စလို႔ အဆင္လိုက္အတန္းတက္သြားနိုင္ပါတယ္။
KG သင္ရုိးနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး သိခ်င္တာရွိရင္ ေအာက္ကလင့္ေတြကို download ဆြဲျပီး ဖတ္ၾကည့္နိုင္ပါတယ္ ။ ေမးခ်င္တာရွိရင္ chat box က ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။ အင္တာနက္လိုင္းမရတဲ့မိဘေတြကိုလည္း ျပန္ေ၀မ်ွေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။
# ေအာက္က လင့္ credit ပါ။
KG တန္း ဆရာလမ္းၫႊန္ စာအုပ္ကို လိုခ်င္ေသာ ဆရာ ဆရာမ မ်ားႏွင့္ KG တန္းသားသားမီးမီးတို႔၏ မိဘမ်ားအတြက္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာ ဖတ္႐ႈ သင္ၾကားလိုပါက ဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္မွာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါရန္ pdf ဖိုင္ အေနျဖင့္ ေအာက္တြင္ေပးထားေသာ လင့္မွာ လိုခ်င္ေသာ စာအုပ္မ်ားကို (download) ေဒါင္းလုတ္ဆြဲႏိုင္ပါသည္
PDF READER ျဖင့္ဖတ္႐ႈ့ႏိုင္ပါသည္ ။
Pdf reader.apk ဆြဲရန္
KG ကဗ်ာ ဘာသာစကား ပံုျပင္ ဆရာကိုင္ (၁) size.3.64 MB
KG သင္ျပမႈပံုစံ ဆရာလမ္းၫႊန္ (၂) size.4.31 MB
KG ဆရာ လမ္းညႊန္ (3) size. 17.56 MB
01.Myanmar TB (outline)
http://www.iqytechnicalcollege.com/01.Myanmar TB (outline).pdf
02.English TB (10-01-2017) (outline)
http://www.iqytechnicalcollege.com/02.English TB (10-01-2017) (outline).pdf
03.Math text book final
www.iqytechnicalcollege.com/03.Math text book final.pdf
04.Science 9-1-2017 TB
http://www.iqytechnicalcollege.com/04.Science 9-1-2017 TB.pdf
05.G-1 Social Study Text book (10-1- 2017)(outline)
http://www.iqytechnicalcollege.com/05.G-1 Social Study Text book (10-1- 2017)(outline).pdf
06-Life Skills TB 10 1 2017
http://www.iqytechnicalcollege.com/06-Life Skills TB 10 1 2017.pdf
08- PE G1 Textbook 13-1-2017(NCC4back)outline
http://www.iqytechnicalcollege.com/08- PE G1 Textbook 13-1-2017(NCC4back)outline.pdf
09-Art Text book
www.iqytechnicalcollege.com/09-Art Text book.pdf
10-Performing Arts TB 17 1 2017
http://www.iqytechnicalcollege.com/10-Performing Arts TB 17 1 2017.pdf
2. Grade(1) (ပထမတန်း)
အခြေခံပညာရေး G1 တက်ရောက်မယ့်ကလေးတွေဟာ KG တန်းပြီးထားတဲ့အတွက် ခဲတံသေချာကိုင်နိုင်ပြီး စာရေးနိုင်တဲ့အဆင့်မှာရှိနေပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံမရှိသော မိဘအနေနဲ့ အောက်ပါအချက်တွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ ကဗျာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် မှတ်မိတယ်ဆိုရင် ဟန်ပန်ဖြင့်ပြန်ဆိုစေခြင်း ၊ က ခ ၊ A B C D ပြန်ဆိုစေခြင်း ( ပြန်ဆိုရင်းမှားလျှင်လည်း နားထောင်ပေးရန် )
ခဲတံကိုင်ဖူးသောကလေးအနေနဲ့ ၄ကြောင်းမျဉ်းစာအုပ်နဲ့ မစိမ်းလှပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် KG မှာ သင်ယူခဲ့ရတဲ့အရာထဲက ကလေးမှတ်မိစေမယ့်အရာကို ချရေးစေပါမယ်။ ဥပမာ ဝလုံးမှတ်မိရင် ဝလုံးကို ချရေးစေခြင်း
ရေးတဲ့နေရာမှာ ဘယ်နှစ်မျက်နှာရေးရမယ်လို့မပြောပဲ မိဘမှ ကလေးသိနိုင်သော သီချင်းတစ်ပုဒ်စာကိုဆိုပြ၍ သီချင်းဆုံးတဲ့အထိသာရေးစေရန် (သီချင်းဖွင့်ပြလည်းရပါတယ်)
ဥပမာ ဝလုံးလေးချရေးလိုက်ပါအုံး မေမေ/ဖေဖေက ...... သီချင်းဖွင့်/ဆိုပြမယ် အဲဒီသီချင်းဆုံးသွားရင် ရေးတာရပ်မယ်။ မြန်ဖို့မလို လက်ရေးလှဖို့လိုတဲ့အကြောင်းထည့်ပေးရန် ၊ ကလေးရေးပြီးတဲ့အခါ လှတဲ့ ဝလုံးလေးတွေကို သေချာပြပြီး ချီးကျူးပေးရန် ( စတေကာကပ်ပေးခြင်း ၊ ဘီစကစ်မုန့်များပေးခြင်း လုပ်ပေးနိုင်သည် ) ဝလုံးရေးပြီးတဲ့အခါ 'က ခ 'ထဲမှ သူမှတ်မိတဲ့စာလုံးကို ချရေးစေပါမယ်။ ဥပမာ ' စ ' ကို မှတ်မိရင် ' စ ' ကို ချရေးစေပါမယ်။ အစဉ်တိုင်းဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ မိဘနဲ့ကလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကလေးမှတ်မိရာကနေ ချရေးစေတာဟာ သူ့အတွက်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးတာဖြစ်လို့ ကလေးအတွက်လည်းအဆင်ပြေပါမယ်။ ထိုအတိုင်း A B C Dab cdကို ရေးစေပါမယ်။
ကလေးက မှတ်မိတဲ့စာလုံးများမရှိရင်တော့ မိဘက မှတ်မိအောင် ပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်။
စာသင်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ KG တန်းမှာပြောခဲ့သလို အိမ်တွင်းမှုတွေကူလုပ်စေတာ သစ်ပင်အတူစိုက်တာမျိုး ဆေးရောင်ခြယ် စက္ကူခေါက် စတာတွေလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ KG G1 အရွယ်ဟာ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို လုပ်ဆောင်ရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိတာဝန်ယူခြင်းနဲ့ဆိုင်တာတွေသင်ပေးရပါမယ်။ ဥပမာ စားပြီးသားပန်ကန်သိမ်းခြင်း ဆော့ပြီးသားကစားစရာပြန်သိမ်းစေခြင်း သန့်စင်ခန်းသွားတတ်အောင်သင်ခြင်း
ကလေးက မလုပ်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ မိဘနဲ့အတူလုပ်ဖို့ခေါ်ရပါမယ်။ ကောင်းစွာလုပ်နိုင်တဲ့အခါ * ချီးကျူးပေးပါ *
သင်ကြားပေးနေစဉ်မှာ မမေ့ရမှာက ကလေးဆိုတာ ကလေးလောက်ပဲမှတ်သားနိုင်တာကိုမမေ့စေချင်ပါဘူး။ ဒါလေးတောင်မမှတ်မိဘူးလား အသုံးမကျဘူး စတဲ့အသုံးနှုန်းတွေရှောင်ပေးပါ
ဒီကာလဟာ ကိုဗစ်ရောဂါရှိနေသေးတဲ့အတွက် လက်ဆေးတတ်တဲ့အလေ့အထကိုပါထည့်သင်ပေးပါ။
ပုံပြင်ဖတ်ပြတဲ့အလေ့အထကိုလည်းလုပ်စေချင်ပါတယ်။ ရောက်တတ်ရာရာပြောတာထက် စာရိတ္တနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အကြောင်းအရာ ပုံပြင်လေးတွေကို ပြောပြရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ မိဘကဖတ်/ပြောပြနေတဲ့အခါ ကလေးကို ပြန်ပြန်မေးပေးပါ။ ဥပမာ ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ကျားကြီးရယ် ခြင်္သေ့ကြီးရယ် ဆိုပြီး သူငယ်ချင်း၂ယောက်ရှိသတဲ့ကွယ်။ ဘယ်သူရယ် ဘယ်သူရယ်လဲ? ဒီလိုမျိုးလေးပြန်မေးစေချင်တာပါ။ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်လုံးပြီးတဲ့အခါ ကလေးကိုသူမှတ်မိသလောက်ပြန်ပြောပြစေရပါမယ်။ မှားတာကိုမထောက်ပါနဲ့။ ပြောပြီးတဲ့အခါ လက်ခုပ်တီးပြီး * ချီးကျူးပေးပါ*
ဒီအလေ့အကျင့်တွေက မိဘတွေအနေနဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ တစ်ချို့မိဘတွေက G1 ဖတ်စာအုပ်နဲ့ သင်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ် ။ G1 ဖတ်စာအုပ်က အရင်ကတော့ တစ်စုံ ၁သောင်း/၁သောင်းအောက်ပါ။ အခုတော့မသိပါ။ ဘာသာရပ် ၁ဝဘာသာသင်ရပါတယ်။ အပြင်ဖတ်စာအုပ်က ရဘာသာပဲ ပါမယ်ထင်တယ်။ သေချာတော့မမှတ်မိတော့ဘူး။ ဖတ်စာအုပ်ရှိရင်တော့ ကလေး ကို မြန်မာဖတ်စာထဲက ကဗျာလေးတွေ ဟန်ဖြင့်ဆိုပြနိုင်ပါတယ်။ စာရိတ္တ ဘဝတွက်တာထဲက စာလေးတွေကိုဖတ်ပြပြီး အမေးအဖြေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ရိုးသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံရှိရင်တောင် အမြဲတမ်းသင်နေမှသာ စနစ်တကျဖြစ်မှာမို့ ကလေး မှတ်မိ တဲ့ အရာ မိဘလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အထိဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်။
ဥပမာ အင်္ဂလိပ်စာ A B C D အရစ်အဆွဲတွေဖတ်စာအုပ်ထဲကနေ ပြန်ကြည့်ပြီး ဖတ်စာအုပ်ကလမ်းညွှန်သလို ရေးစေတာမျိုးဆို လုံလောက်ပါတယ် ။
အရေးကြီးတာကတော့ ကလေးမှတ်မိတာကိုပဲ ပိုမှတ်မိအောင် မှန်ကန်အောင်လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ရင် အဆင်ပြေပါပြီ။ အသစ်တွေကို မိဘကသင်ကြားပေးတဲ့အခါ လွဲချော်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ book ကို မိဘက ဘုတ်လို့ထွက်ပြပြီး သင်ရင် ကလေးကလည်း ဘုတ်ပဲထွက်ပါလိမ့်မယ်။ အသံထွက်မှန်က ဘွတ် (အနီးစပ်ဆုံးထွက်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်) ပါ။ ဒါပေမယ့် ကလေးက ပထမဆုံးအကြိမ်က ကြားတာကိုပဲအများအားဖြင့်မှတ်သားကြပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ ပြင်ဖို့အဆင်မပြေနိုင်လောက်တော့ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အသံထွက်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ်မသေချာရင် YouTube ကနေ သို့မဟုတ် Google ကနေ ထွက်တာကိုပဲနားထောင်စေပါ။ အဆင်မပြေရင်တော့ ကလေးသိပြီးသားကိုပဲ ပိုမှတ်မိအောင်လုပ်ပေးရင်လုံလောက်ပါပြီ။ ဥပမာ A B C D ကို ကလေးက သေချာသိပြီဆိုရင် ကျောပေါ်မှာ ရေးပြီး ကလေးကို ဘာစာလုံးလဲ မေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ A ကနေ Z အထိ ၄လုံးစီလောက်ခွဲပြီးဆော့ခြင်းဖြင့် သင်ယူခိုင်းလို့ရပါတယ်။ A ကနေ Z အထိ တစ်ပြိုင်ထဲမဆော့စေချင်ပါဘူး။ A မှ F အထိ လောက် ခွဲပြီးဆော့သွားစေချင်တာပါ။ Z အထိပြီးသွားရင် လုံလောက်ပါပြီ။ အင်တာနက်ရတဲ့မိဘတွေက YouTube ကနေ A B C သီချင်းလေးတွေဖွင့်ပြနိုင်ပါတယ်။
နောက်အရေးကြီးတာတစ်ခုက မိဘက စကားလုံးတွေသင်တယ်ဆိုပါစို့။ G1 အင်္ဂလိပ်စာမှာ စာလုံးပေါင်းမသင်ပါဘူးနော်။ ကလေးက စာအုပ်ပုံကို မြင် ရင် ဘွတ်လို့သိရင်ရပါပြီ။
b o o k ဘွတ် စာအုပ် လို့ မသင်ရပါဘူး။ ပုံလေးပြရင်ရပါပြီ။ ဒါလေး သတိပြုပေးပါနော် ။
နောက်ဆုံးတစ်ခုက စာပဲသင်စေချင်တယ် အချိန်လည်းမပေးနိုင်လို့ စာသင်ပေးမယ့်သူဆီပို့မယ်ဆိုရင်တော့ G1 သင်ခန်းစာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စနစ်တကျသင်ပေးနိုင်မယ့်သူရှိရင်တော့ ပို့နိုင်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ အပေါ်မှာပြောထားသလို အလွဲတွေနဲ့ကြုံရင် ကလေးအတွက် ဘာမှမထူးပါဘူးလို့ပဲပြောပါရစေ။
ဆရာကိုင်နှင့် ကျောင်းသုံးစာအုပ်များကို အောက်ဖော်ပြပါ link တွင် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ပထမတန်း၊ ကျောင်းသားကိုင် စာအုပ်များကို pdf အနေဖြင့် လိုချင်ကြပါသော ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသားမိဘများအတွက် သီးသန့် download လုပ်နိုင်ဖို့ပါ။
Link credit ပါ
မိမိတို့လိုချင်သော စာအုပ်တစ်ခုချင်းစီကို အောက်တွင်ပေးထားသော link များမှ Download ရယူနိုင်ပါတယ်.....
Grade 1 (Text Books)
2. Grade(1) (ပထမတန္း)
အေျခခံပညာေရး G1 တက္ေရာက္မယ့္ကေလးေတြဟာ KG တန္းျပီးထားတဲ့အတြက္ ခဲတံေသခ်ာကိုင္နိုင္ျပီး စာေရးနိုင္တဲ့အဆင့္မွာရွိေနပါျပီ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင္ၾကားေရးအေတြ႔အႀကံဳမရွိေသာ မိဘအေနနဲ႔ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။
ဥပမာ ကဗ်ာေလးေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ မွတ္မိတယ္ဆိုရင္ ဟန္ပန္ျဖင့္ျပန္ဆိုေစျခင္း ၊ က ခ ၊ A B C D ျပန္ဆိုေစျခင္း ( ျပန္ဆိုရင္းမွားလ်ွင္လည္း နားေထာင္ေပးရန္ )
ခဲတံကိုင္ဖူးေသာကေလးအေနနဲ႔ ၄ေၾကာင္းမ်ဥ္းစာအုပ္နဲ႔ မစိမ္းလွပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ KG မွာ သင္ယူခဲ့ရတဲ့အရာထဲက ကေလးမွတ္မိေစမယ့္အရာကို ခ်ေရးေစပါမယ္။ ဥပမာ ၀လုံးမွတ္မိရင္ ၀လံုးကို ခ်ေရးေစျခင္း
ေရးတဲ့ေနရာမွာ ဘယ္နွစ္မ်က္နွာေရးရမယ္လို႔မေျပာပဲ မိဘမွ ကေလးသိနိုင္ေသာ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္စာကိုဆိုျပ၍ သီခ်င္းဆံုးတဲ့အထိသာေရးေစရန္ (သီခ်င္းဖြင့္ျပလည္းရပါတယ္)
ဥပမာ ၀လံုးေလးခ်ေရးလိုက္ပါအံုး ေမေမ/ေဖေဖက ...... သီခ်င္းဖြင့္/ဆိုျပမယ္ အဲဒီသီခ်င္းဆံုးသြားရင္ ေရးတာရပ္မယ္။ ျမန္ဖို႔မလို လက္ေရးလွဖို႔လိုတဲ့အေၾကာင္းထည့္ေပးရန္ ၊ ကေလးေရးျပီးတဲ့အခါ လွတဲ့ ၀လံုးေလးေတြကို ေသခ်ာျပျပီး ခ်ီးက်ဴးေပးရန္ ( စေတကာကပ္ေပးျခင္း ၊ ဘီစကစ္မုန္႔မ်ားေပးျခင္း လုပ္ေပးနိုင္သည္ ) ၀လုံးေရးျပီးတဲ့အခါ 'က ခ 'ထဲမွ သူမွတ္မိတဲ့စာလုံးကို ခ်ေရးေစပါမယ္။ ဥပမာ ' စ ' ကို မွတ္မိရင္ ' စ ' ကို ခ်ေရးေစပါမယ္။ အစဥ္တိုင္းျဖစ္စရာမလိုပါဘူး။ မိဘနဲ႔ကေလးျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ကေလးမွတ္မိရာကေန ခ်ေရးေစတာဟာ သူ႔အတြက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးတာျဖစ္လို႔ ကေလးအတြက္လည္းအဆင္ေျပပါမယ္။ ထိုအတိုင္း A B C Dab cdကို ေရးေစပါမယ္။
ကေလးက မွတ္မိတဲ့စာလုံးမ်ားမရွိရင္ေတာ့ မိဘက မွတ္မိေအာင္ ေျပာျပေပးနိုင္ပါတယ္။
စာသင္ဖို႔အဆင္မေျပတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ KG တန္းမွာေျပာခဲ့သလို အိမ္တြင္းမႈေတြကူလုပ္ေစတာ သစ္ပင္အတူစိုက္တာမ်ိဳး ေဆးေရာင္ျခယ္ စကၠဴေခါက္ စတာေတြလုပ္ေပးလို႔ရပါတယ္။ KG G1 အရြယ္ဟာ ကိုယ္လုပ္နိုင္တဲ့အရာေတြကို လုပ္ေဆာင္ရေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ မိမိတာ၀န္ယူျခင္းနဲ႔ဆိုင္တာေတြသင္ေပးရပါမယ္။ ဥပမာ စားျပီးသားပန္ကန္သိမ္းျခင္း ေဆာ့ျပီးသားကစားစရာျပန္သိမ္းေစျခင္း သန္႔စင္ခန္းသြားတတ္ေအာင္သင္ျခင္း
ကေလးက မလုပ္ခ်င္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ မိဘနဲ႔အတူလုပ္ဖို႔ေခၚရပါမယ္။ ေကာင္းစြာလုပ္နိုင္တဲ့အခါ * ခ်ီးက်ဴးေပးပါ *
သင္ၾကားေပးေနစဥ္မွာ မေမ့ရမွာက ကေလးဆိုတာ ကေလးေလာက္ပဲမွတ္သားနိုင္တာကိုမေမ့ေစခ်င္ပါဘူး။ ဒါေလးေတာင္မမွတ္မိဘူးလား အသံုးမက်ဘူး စတဲ့အသံုးနႈန္းေတြေရွာင္ေပးပါ
ဒီကာလဟာ ကိုဗစ္ေရာဂါရွိေနေသးတဲ့အတြက္ လက္ေဆးတတ္တဲ့အေလ့အထကိုပါထည့္သင္ေပးပါ။
ပံုျပင္ဖတ္ျပတဲ့အေလ့အထကိုလည္းလုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေရာက္တတ္ရာရာေျပာတာထက္ စာရိတၱနဲ႕ပတ္သတ္တဲ့အေၾကာင္းအရာ ပံုျပင္ေလးေတြကို ေျပာျပရင္ပိုေကာင္းပါတယ္။ မိဘကဖတ္/ေျပာျပေနတဲ့အခါ ကေလးကို ျပန္ျပန္ေမးေပးပါ။ ဥပမာ ဟိုးေရွးေရွးတုန္းက က်ားႀကီးရယ္ ျခေသၤ့ႀကီးရယ္ ဆိုျပီး သူငယ္ခ်င္း၂ေယာက္ရွိသတဲ့ကြယ္။ ဘယ္သူရယ္ ဘယ္သူရယ္လဲ? ဒီလိုမ်ိဳးေလးျပန္ေမးေစခ်င္တာပါ။ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္လုံးျပီးတဲ့အခါ ကေလးကိုသူမွတ္မိသေလာက္ျပန္ေျပာျပေစရပါမယ္။ မွားတာကိုမေထာက္ပါနဲ႔။ ေျပာျပီးတဲ့အခါ လက္ခုပ္တီးျပီး * ခ်ီးက်ဴးေပးပါ*
ဒီအေလ့အက်င့္ေတြက မိဘေတြအေနနဲ႕ လုပ္နိုင္တဲ့အရာေတြျဖစ္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ သင္ၾကားေရးအေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့ တစ္ခ်ိဳ႔မိဘေတြက G1 ဖတ္စာအုပ္နဲ႔ သင္မယ္ဆိုလည္းရပါတယ္ ။ G1 ဖတ္စာအုပ္က အရင္ကေတာ့ တစ္စံု ၁ေသာင္း/၁ေသာင္းေအာက္ပါ။ အခုေတာ့မသိပါ။ ဘာသာရပ္ ၁၀ဘာသာသင္ရပါတယ္။ အျပင္ဖတ္စာအုပ္က ၇ဘာသာပဲ ပါမယ္ထင္တယ္။ ေသခ်ာေတာ့မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ ဖတ္စာအုပ္ရွိရင္ေတာ့ ကေလး ကို ျမန္မာဖတ္စာထဲက ကဗ်ာေလးေတြ ဟန္ျဖင့္ဆိုျပနိုင္ပါတယ္။ စာရိတၱ ဘ၀တြက္တာထဲက စာေလးေတြကိုဖတ္ျပျပီး အေမးအေျဖလုပ္နိုင္ပါတယ္။ သင္ရုိးသစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ သင္ၾကားေရးအေတြ႔အႀကံဳရွိရင္ေတာင္ အျမဲတမ္းသင္ေနမွသာ စနစ္တက်ျဖစ္မွာမို႕ ကေလး မွတ္မိ တဲ့ အရာ မိဘလုပ္ေပးနိုင္တဲ့အထိဆိုရင္လံုေလာက္ပါတယ္။
ဥပမာ အဂၤလိပ္စာ A B C D အရစ္အဆြဲေတြဖတ္စာအုပ္ထဲကေန ျပန္ၾကည့္ျပီး ဖတ္စာအုပ္ကလမ္းညႊန္သလို ေရးေစတာမ်ိဳးဆို လံုေလာက္ပါတယ္ ။
အေရးႀကီးတာကေတာ့ ကေလးမွတ္မိတာကိုပဲ ပိုမွတ္မိေအာင္ မွန္ကန္ေအာင္ေလ့က်င့္ေပးနိုင္ရင္ အဆင္ေျပပါျပီ။ အသစ္ေတြကို မိဘကသင္ၾကားေပးတဲ့အခါ လြဲေခ်ာ္နိုင္တဲ့အရာေတြရွိနိုင္ပါတယ္။
ဥပမာ book ကို မိဘက ဘုတ္လို႔ထြက္ျပျပီး သင္ရင္ ကေလးကလည္း ဘုတ္ပဲထြက္ပါလိမ့္မယ္။ အသံထြက္မွန္က ဘြတ္ (အနီးစပ္ဆံုးထြက္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္) ပါ။ ဒါေပမယ့္ ကေလးက ပထမဆံုးအႀကိမ္က ၾကားတာကိုပဲအမ်ားအားျဖင့္မွတ္သားၾကပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ျပင္ဖို႔အဆင္မေျပနိုင္ေလာက္ေတာ့ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အသံထြက္နဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ကိုယ္မေသခ်ာရင္ YouTube ကေန သို႔မဟုတ္ Google ကေန ထြက္တာကိုပဲနားေထာင္ေစပါ။ အဆင္မေျပရင္ေတာ့ ကေလးသိျပီးသားကိုပဲ ပိုမွတ္မိေအာင္လုပ္ေပးရင္လံုေလာက္ပါျပီ။ ဥပမာ A B C D ကို ကေလးက ေသခ်ာသိျပီဆိုရင္ ေက်ာေပၚမွာ ေရးျပီး ကေလးကို ဘာစာလုံးလဲ ေမးတဲ့ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ A ကေန Z အထိ ၄လံုးစီေလာက္ခြဲျပီးေဆာ့ျခင္းျဖင့္ သင္ယူခိုင္းလို႔ရပါတယ္။ A ကေန Z အထိ တစ္ျပိဳင္ထဲမေဆာ့ေစခ်င္ပါဘူး။ A မွ F အထိ ေလာက္ ခြဲျပီးေဆာ့သြားေစခ်င္တာပါ။ Z အထိျပီးသြားရင္ လံုေလာက္ပါျပီ။ အင္တာနက္ရတဲ့မိဘေတြက YouTube ကေန A B C သီခ်င္းေလးေတြဖြင့္ျပနိုင္ပါတယ္။
ေနာက္အေရးႀကီးတာတစ္ခုက မိဘက စကားလံုးေတြသင္တယ္ဆိုပါစို႔။ G1 အဂၤလိပ္စာမွာ စာလုံးေပါင္းမသင္ပါဘူးေနာ္။ ကေလးက စာအုပ္ပံုကို ျမင္ ရင္ ဘြတ္လို႔သိရင္ရပါျပီ။
b o o k ဘြတ္ စာအုပ္ လို႔ မသင္ရပါဘူး။ ပံုေလးျပရင္ရပါျပီ။ ဒါေလး သတိျပဳေပးပါေနာ္ ။
ေနာက္ဆံုးတစ္ခုက စာပဲသင္ေစခ်င္တယ္ အခ်ိန္လည္းမေပးနိုင္လို႔ စာသင္ေပးမယ့္သူဆီပို႔မယ္ဆိုရင္ေတာ့ G1 သင္ခန္းစာနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး စနစ္တက်သင္ေပးနိုင္မယ့္သူရွိရင္ေတာ့ ပို႔နိုင္ပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ အေပၚမွာေျပာထားသလို အလြဲေတြနဲ႕ႀကံဳရင္ ကေလးအတြက္ ဘာမွမထူးပါဘူးလို႔ပဲေျပာပါရေစ။
ဆရာကိုင္ႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ link တြင္ ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။
ပထမတန္း၊ ေက်ာင္းသားကိုင္ စာအုပ္မ်ားကို pdf အေနျဖင့္ လိုခ်င္ၾကပါေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ download လုပ္နိုင္ဖို႔ပါ။
မိမိတို႔လိုခ်င္ေသာ စာအုပ္တစ္ခုခ်င္းစီကို ေအာက္တြင္ေပးထားေသာ link မ်ားမွ Download ရယူႏိုင္ပါတယ္.....
3. Grade(2) ( ဒုတိယတန်း )
အခြေခံပညာ G2 အတန်းတက်ရောက်ရမယ့် ကလေးတွေဟာ အနည်းငယ်စာဖတ်တတ်တဲ့အနေအထားမှာရှိနိုင်ပါတယ်။ ( စာလုံးပေါင်းဖတ်တတ်လည်းအဆင်ပြေပါတယ် ) ဒါ့ကြောင့် သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့မိဘတွေအနေနဲ့ အောက်ပါအချက်တွေလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကလေးကြိုက်နှစ်သက်မယ့် ကာတွန်း ပုံပြင် စတဲ့ ရုပ်ပြတိုလေးတွေဖတ်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ဖတ်တဲ့အခါ စာလုံးပေါင်းဖတ်နေလည််း ဖတ်ပါစေ။ စာလုံးပေါင်းဖတ်တာတောင် အဆင်မပြေနိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုရင် မိဘက စာရွက်မှာ စာတိုလေးတွေရေးပြီး ကပ်ထားပေးပါ။ ဥပမာ ' မနက်စောစောထပါ။ ' ပြီးရင် ကလေးကို ထိုစာတမ်းလေးကိုဖတ်ခိုင်းပါ။ အသံထွက်မှားတဲ့နေရာ မိဘမှတွဲဖတ်ပေးပါ ။ တစ်နေ့ကို ထိုစာတမ်းမျိုး ၃ခုစာလောက်ပဲ ကလေးကိုဖတ်ခိုင်းပါ ။ ဖတ်ပြီးလျှင်မှတ်မိသလောက်ပြန်ချရေးခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ပြီးလျှင်ထိုစာတမ်းကို (မိဘရေးပေးထားတဲ့စာတမ်း သို့မဟုတ် ကလေးပြန်ချရေးထားသော စာတမ်း ) နံရံမှာတန်းစီကပ်ပေးပါ။ နောက်နေ့မှာလည်း မနေ့ကကပ်ထားတဲ့ စာ၃ခုကိုပြန်ဖတ်စေပြီးနောက် နောက်ထပ်စာတမ်း ၃ ခုရေး ကလေးကိုဖတ် ပြန်ချရေးခိုင်း ပြီးလျှင် နံရံမှာကပ် ထိုအတိုင်းနေ့တိုင်းလုပ်သွားရင် ကလေးက ပုံပြင်တိုလေးများကိုဖတ်တတ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကို ရောက်လာပါမယ်။ ပုံပြင်ဖတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်လျှင် ကလေးဖတ်ပြီးတဲ့ပုံပြင်ကို မိဘကိုပြန်ပြောပြစေရပါမယ်။ အရေးကြီးတာက ' စိတ်ရှည်ပါ ' ကလေးကို ' ချီးကျူးပါ' G1 အတွက်ရေးတုန်းကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ အခြေခံအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပါ။
သချင်္ာအတွက် အလီကိုကျက်ခိုင်းလို့ရပါပြီ။ အလီကို အစဉ်လိုက်တိုင်းဆိုခိုင်းပြီးတိုင်း ပြန်ဖောက်မေးပေးပါ။ ဥပမာ ကလေးက ၂အလီအကုန်ရသွားပြီဆိုပါစို့။ မိဘက ၂×၅ လီဘယ်လောက်လဲ ၂×၇ လီဘယ်လောက်လဲ ဒီလိုပြန်မေးပေးပါ ။ ကလေးအဆင်ပြေသလောက်အထိကျက်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။
ကလေးရဲ့လက်ရေးကို ပြင်ပေးချင်ရင်တော့ ၄ကြောင်းမျဉ်းမှာ စာတိုလေးတွေကူးရေးစေပြီးပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးကရေးလို့မလှသေးရင် သား/သမီးက ဒီထက်ပိုလှအောင်ရေးနိုင်ပါတယ် ထပ်ရေးကြည့်ပါအုံးလို့ပြောပေးပါ။ လှလာတဲ့အခါ ချီးကျူးပေးပါ။ အရေးကြီးတာက လက်ရေးကလည်းစုတ်ပြတ်နေတာဘာညာ မပြောမိဖို့ပါပဲ 🙄
G2 တက်မယ့်အရွယ်ဟာ တကယ့်ကလေးလေးပဲရှိသေးလို့ အိမ်တွင်းမှုနဲ့ပတ်သတ်တာတွေ ဘာသာရေး မိမိကိုယ်ကိုကို တာဝန်ယူတတ်အောင် စတဲ့အရာတွေဆက်သင်ပေးနိုင်တယ်။ KG G1 မှာလည်းရေးခဲ့ပါတယ်။ စည်းကမ်းဟာ အိမ်ကစပါတယ်။ ကျောင်းမဖွင့်ခင်မှာ မိမိကလေးကို လိုအပ်သလိုပုံဖော်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးစိတ်ဝင်စားမယ့်အရာလေးတွေလည်း လုပ်ဆောင်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ပုံဆွဲခြင်း ဆေးရောင်ခြယ်ခြင်း
ဖတ်စာအုပ်တွေနဲ့ လေ့လာစေချင်ရင်တော့ ဖတ်စာအုပ်တန်ဖိုးက ၁၀၀၀၀/၁၀၀၀၀ အောက်ပါပဲ။ ဘာသာရပ် ၁ဝခု လေ့လာရပါတယ်။ အပြင်ဖတ်စာအုပ်တွေက ဘာသာရပ် ရခုပဲ ပါနိုင်ပါတယ်။ သိပ္ပံ စာရိတ္တစာအုပ် ဘဝတွက်တာစာအုပ်တွေဖတ်စေပြီး အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ သချင်္ာကတော့ သင်တဲ့ပုံစံတွေမတူတော့လို့ စနစ်သစ်သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံမရှိရင် မသင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ် ။ မိဘတတ်နိုင်သလောက်ပဲလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လူမူရေးစာအုပ်ကိုလည်းဖတ်ခိုင်းပြီး ပြန်ပြောပြစေတာမျိုးလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်အတွက်ကတော့ 123 ကို ပဲ အင်္ဂလိပ်လို ရေတွက်နည်းသင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ G2 မှာ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေကို စာလုံးပေါင်းသင်နိုင်ပါပြီ။
မိဘက အင်္ဂလိပ်လိုအနည်းငယ်ပြောဆိုနိုင်ရင် အင်္ဂလိပ်လိုပြောပြီးသင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စကားလုံးလေးတွေသင်တဲ့အခါ သင်နည်းလေးတစ်ခုကို အရင်က ဆရာ ဆရာမတွေအတွက် ဝေမျှပေးဖူးတာလေးရှိလို့ လေ့လာချင်ရင် အောက်က လင့်မှာ ဝင်ကြည့်ပေးပါ။
KG , G1 အတွက် ဖတ်ချင်ရင် ဒီလင့်ခ်မှာဝင်ကြည့်ပေးပါ။
အောက်က Link Credit ပါ။
ဒုတိယတန်း ကျောင်းသားကိုင် စာအုပ်များကို pdf file အဖြစ် လိုချင်ကြလျှင်အောက်တွင်ပေးထားသော link တစ်ခုချင်းစီမှ မိမိတို့ လိုအပ်သော စာအုပ်များကို Download ရယူနိုင်ပါတယ်
စာအုပ်များကို တင်ပေးထားသော မူရင်း Website မှ Download ဆွဲချင်ပါက
သို့ သွားရောက်ပြီး Download ရယူနိုင်ပါတယ်....
6 စာရိတ္တနှင့် ပြည်သူ့နီတိ
3. Grade(2) ( ဒုတိယတန္း )
အေျခခံပညာ G2 အတန္းတက္ေရာက္ရမယ့္ ကေလးေတြဟာ အနည္းငယ္စာဖတ္တတ္တဲ့အေနအထားမွာရွိနိုင္ပါတယ္။ ( စာလုံးေပါင္းဖတ္တတ္လည္းအဆင္ေျပပါတယ္ ) ဒါ့ေၾကာင့္ သင္ၾကားေရးအေတြ႕အႀကံဳမရွိတဲ့မိဘေတြအေနနဲ႔ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြလုပ္ေပးနိုင္ပါတယ္။
ကေလးႀကိဳက္နွစ္သက္မယ့္ ကာတြန္း ပံုျပင္ စတဲ့ ရုပ္ျပတိုေလးေတြဖတ္ခိုင္းနိုင္ပါတယ္။ ဖတ္တဲ့အခါ စာလုံးေပါင္းဖတ္ေနလည္္း ဖတ္ပါေစ။ စာလုံးေပါင္းဖတ္တာေတာင္ အဆင္မေျပနိုင္တဲ့အေျခအေနဆိုရင္ မိဘက စာရြက္မွာ စာတိုေလးေတြေရးျပီး ကပ္ထားေပးပါ။ ဥပမာ ' မနက္ေစာေစာထပါ။ ' ျပီးရင္ ကေလးကို ထိုစာတမ္းေလးကိုဖတ္ခိုင္းပါ။ အသံထြက္မွားတဲ့ေနရာ မိဘမွတြဲဖတ္ေပးပါ ။ တစ္ေန႔ကို ထိုစာတမ္းမ်ိဳး ၃ခုစာေလာက္ပဲ ကေလးကိုဖတ္ခိုင္းပါ ။ ဖတ္ျပီးလ်ွင္မွတ္မိသေလာက္ျပန္ခ်ေရးခိုင္းနိုင္ပါတယ္။ျပီးလ်ွင္ထိုစာတမ္းကို (မိဘေရးေပးထားတဲ့စာတမ္း သို႔မဟုတ္ ကေလးျပန္ခ်ေရးထားေသာ စာတမ္း ) နံရံမွာတန္းစီကပ္ေပးပါ။ ေနာက္ေန႔မွာလည္း မေန႔ကကပ္ထားတဲ့ စာ၃ခုကိုျပန္ဖတ္ေစျပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္စာတမ္း ၃ ခုေရး ကေလးကိုဖတ္ ျပန္ခ်ေရးခိုင္း ျပီးလ်ွင္ နံရံမွာကပ္ ထိုအတိုင္းေန႔တိုင္းလုပ္သြားရင္ ကေလးက ပံုျပင္တိုေလးမ်ားကိုဖတ္တတ္တဲ့အေနအထားတစ္ခုကို ေရာက္လာပါမယ္။ ပံုျပင္ဖတ္နိုင္တဲ့အေျခအေနေရာက္လ်ွင္ ကေလးဖတ္ျပီးတဲ့ပံုျပင္ကို မိဘကိုျပန္ေျပာျပေစရပါမယ္။ အေရးႀကီးတာက ' စိတ္ရွည္ပါ ' ကေလးကို ' ခ်ီးက်ဴးပါ' G1 အတြက္ေရးတုန္းကလည္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အေျခခံအေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ေတြပါ။
သခ်ၤာအတြက္ အလီကိုက်က္ခိုင္းလို႔ရပါျပီ။ အလီကို အစဥ္လိုက္တိုင္းဆိုခိုင္းျပီးတိုင္း ျပန္ေဖာက္ေမးေပးပါ။ ဥပမာ ကေလးက ၂အလီအကုန္ရသြားျပီဆိုပါစို႔။ မိဘက ၂×၅ လီဘယ္ေလာက္လဲ ၂×၇ လီဘယ္ေလာက္လဲ ဒီလိုျပန္ေမးေပးပါ ။ ကေလးအဆင္ေျပသေလာက္အထိက်က္ခိုင္းလို႔ရပါတယ္။
ကေလးရဲ႕လက္ေရးကို ျပင္ေပးခ်င္ရင္ေတာ့ ၄ေၾကာင္းမ်ဥ္းမွာ စာတိုေလးေတြကူးေရးေစျပီးျပင္ေပးနိုင္ပါတယ္။ ကေလးကေရးလို႔မလွေသးရင္ သား/သမီးက ဒီထက္ပိုလွေအာင္ေရးနိုင္ပါတယ္ ထပ္ေရးၾကည့္ပါအံုးလို႔ေျပာေပးပါ။ လွလာတဲ့အခါ ခ်ီးက်ဴးေပးပါ။ အေရးႀကီးတာက လက္ေရးကလည္းစုတ္ျပတ္ေနတာဘာညာ မေျပာမိဖို႔ပါပဲ
G2 တက္မယ့္အရြယ္ဟာ တကယ့္ကေလးေလးပဲရွိေသးလို႔ အိမ္တြင္းမႈနဲ႔ပတ္သတ္တာေတြ ဘာသာေရး မိမိကိုယ္ကိုကို တာ၀န္ယူတတ္ေအာင္ စတဲ့အရာေတြဆက္သင္ေပးနိုင္တယ္။ KG G1 မွာလည္းေရးခဲ့ပါတယ္။ စည္းကမ္းဟာ အိမ္ကစပါတယ္။ ေက်ာင္းမဖြင့္ခင္မွာ မိမိကေလးကို လိုအပ္သလိုပုံေဖာ္နိုင္ပါတယ္။ ကေလးစိတ္၀င္စားမယ့္အရာေလးေတြလည္း လုပ္ေဆာင္ခိုင္းနိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ ပံုဆြဲျခင္း ေဆးေရာင္ျခယ္ျခင္း
ဖတ္စာအုပ္ေတြနဲ႔ ေလ့လာေစခ်င္ရင္ေတာ့ ဖတ္စာအုပ္တန္ဖိုးက ၁၀၀၀၀/၁၀၀၀၀ ေအာက္ပါပဲ။ ဘာသာရပ္ ၁၀ခု ေလ့လာရပါတယ္။ အျပင္ဖတ္စာအုပ္ေတြက ဘာသာရပ္ ၇ခုပဲ ပါနိုင္ပါတယ္။ သိပၸံ စာရိတၱစာအုပ္ ဘ၀တြက္တာစာအုပ္ေတြဖတ္ေစျပီး အျပန္အလွန္ ေဆြးေနြးနိုင္ပါတယ္။ သခ်ၤာကေတာ့ သင္တဲ့ပံုစံေတြမတူေတာ့လို႔ စနစ္သစ္သင္ၾကားေရးအေတြ႔အႀကံဳမရွိရင္ မသင္လည္းအဆင္ေျပပါတယ္ ။ မိဘတတ္နိုင္သေလာက္ပဲလုပ္ေပးနိုင္ပါတယ္။ လူမူေရးစာအုပ္ကိုလည္းဖတ္ခိုင္းျပီး ျပန္ေျပာျပေစတာမ်ိဳးလုပ္ေပးနိုင္ပါတယ္။
အဂၤလိပ္အတြက္ကေတာ့ 123 ကို ပဲ အဂၤလိပ္လို ေရတြက္နည္းသင္ေပးနိုင္ပါတယ္။ G2 မွာ အဂၤလိပ္စာလုံးေတြကို စာလုံးေပါင္းသင္နိုင္ပါျပီ။
မိဘက အဂၤလိပ္လိုအနည္းငယ္ေျပာဆိုနိုင္ရင္ အဂၤလိပ္လိုေျပာျပီးသင္ေပးနိုင္ပါတယ္။ စကားလုံးေလးေတြသင္တဲ့အခါ သင္နည္းေလးတစ္ခုကို အရင္က ဆရာ ဆရာမေတြအတြက္ ေ၀မ်ွေပးဖူးတာေလးရွိလို႔ ေလ့လာခ်င္ရင္ ေအာက္က လင့္မွာ ၀င္ၾကည့္ေပးပါ။
KG , G1 အတြက္ ဖတ္ခ်င္ရင္ ဒီလင့္ခ္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးပါ။
ေအာက္က Link Credit ပါ။
ဒုတိယတန္း ေက်ာင္းသားကိုင္ စာအုပ္မ်ားကို pdf file အျဖစ္ လုိခ်င္ၾကလ်ွင္ေအာက္တြင္ေပးထားေသာ link တစ္ခုခ်င္းစီမွ မိမိတို႔ လုိအပ္ေသာ စာအုပ္မ်ားကို Download ရယူႏိုင္ပါတယ္
စာအုပ္မ်ားကို တင္ေပးထားေသာ မူရင္း Website မွ Download ဆြဲခ်င္ပါက
သို႔ သြားေရာက္ၿပီး Download ရယူႏိုင္ပါတယ္....
6 စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိ
4. Grade(3) တတိယတန်း
အခြေခံပညာ G3 အတန်းကို တက်ရောက်မယ့်ကလေးဟာ စာအတော်အသင့်ဖတ်တတ်နိုင်ပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့်သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံမရှိသောမိဘများအနေနဲ့ အောက်ပါအချက်တွေကိုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
မိမိတို့ကလေးကို သင့်လျော်ရာ စာပိုဒ်အတိုလေးတွေဖတ်ခိုင်းကြည့်ပါ။ ကလေးက မှန်မှန်ကန်ကန် မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖတ်နိုင်ရင်
မှတ်သားစရာပုံပြင်တိုလေးတွေကို အသံထွက်ဖတ်ခိုင်းပြီး သား/သမီးဆိုရင်ရော ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ ဆိုတဲ့ ဆွေးနွေးမှုမေးခွန်းလေးတွေမေးပေးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးက မှန်မှန်ကန်ကန် မဖတ်နိုင်သေးရင် G2 မှာ ပြောခဲ့သလို စာဖတ်တတ်ဖို့ အလေ့အကျင့်လေးတွေလုပ်ပေးပါ။ ဒီလင့်ခ်မှာ ဝင်ကြည့်ပေးပါ။
G3 အရွယ်ဟာ စာကောင်းကောင်းဖတ်နိုင်ဖို့ လိုလာပါပြီ။ စာဖတ်တတ်ရုံမဟုတ်ပဲ ဆွေးနွေးမှုပုံစံလေးတွေပါထည့်လုပ်ပေးနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။
G2 မှာ ပြော ခဲ့ သလို ပဲ G3 ကလေးတွေအနေနဲ့ အလီဇယားကိုကျက်ထားသင့်ပါတယ်။ အလီကို အစဉ်လိုက်တိုင်းဆိုခိုင်းပြီးတိုင်း ဖောက်မေးပေးပါ။ ဥပမာ ၅×၈ လီဘယ်လောက်လဲ
G3 ကလေးကို G2ကလိုပဲ လက်ရေးလှဆက်သင်နိုင်ပါတယ်။ G3 ကလေးတွေဟာ ၄ကြောင်းမျဉ်းမသုံးရတော့ဘဲ ၂ကြောင်းမျဉ်းနဲ့စရေးရပါပြီ။ ( ကျောင်းအပေါ်မူတည်ပါမယ် ) ၂ကြောင်းမျဉ်းရေးတတ်အောင် သင်ပေးထားနိုင်ပါတယ် ။ စာပိုဒ်တိုလေးတွေကို ၂ကြောင်းမျဉ်းစာအုပ်မှာ ကူးရေးစေပြီး လက်ရေးပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၂ကြောင်းမျဉ်းမှာ လက်ရေးအဆင်မပြေတဲ့အခါ ၄ကြောင်းမျဉ်းနဲ့ပြန်ရေးခိုင်းပြီးမှ ၂ကြောင်းမျဉ်းနဲ့ပြန်ရေးခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
G3 အရွယ်ဟာ နားလည်လာတဲ့အရွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့တတ်နိုင်တဲ့အရာတွေသင်ပေးနိုင်ပါပြီ။ ဥပမာ စားပြီးသားပန်းကန်ဆေးခြင်း သစ်ပင်ရေလောင်းခြင်း အိမ်တွင်းမှုသင်ပေးခြင်း
ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းရည်အပိုင်းဖွံဖြိုးအောင် သစ်ရွက်များဖြင့် ဆင်ပုံ
ငှက်ပုံ ငါးပုံ စသဖြင့်ပုံဖော်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ပန်းချီဆွဲခြင်း ဆေးရောင်ခြယ်ခြင်း စက္ကူခေါက်ခြင်း တွေကိုလည်း လုပ်ခိုင်းသင့်ပါတယ် ။ G2 မှာ သင်ခဲ့ရတဲ့ သီချင်း ကဗျာများရှိရင်လည်း ဟန်အမူအယာဖြင့်ဆိုပြခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
ဖတ်စာအုပ်နဲ့သင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘာသာရပ် ၁ဝခုလေ့လာရပါမယ်။ အပြင်မှာဝယ်ရင် ရဘာသာပဲပါပါမယ်။စျေးနှုန်းသေချာမသိပါ။
မြန်မာစာအတွက် စာကိုသေချာဖတ်တတ်ဖို့ပဲ အဓိကလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာအတွက် ဖတ်စာအုပ်ထဲမှ ကလေးသိပြီးသား စကားလုံးတွေကိုပဲ စာလုံးပေါင်းပြန်ကျက်စေတာ ပိုအဆင်ပြေပါမယ်။ G3 အင်္ဂလိပ်မှ ပုံပြင်သင်နည်းကိုလေ့လာလိုလျှင်
သချာင်္အတွက်က ပေါင်းခြင်း နူတ်ခြင်း ပုစ္ဆာတွေကို တွက်ခိုင်းနိုင်ပါတယ် ။ G2 မှာ ကလေးကသင်ဖူးလို့ မိတ်ဆွေခေါ်ပေါင်းခြင်း နူတ်ခြင်းကို သိနိုင်ပါတယ်။ ကလေးကမမှတ်မိရင်လည်း အလီကိုရအောင်လုပ်ပေးနိုင်ရင်ပဲအဆင်ပြေပါတယ်။
သိပ္ပံ လူမူရေး စာရိတ္တ ဘဝတွက်တာ စာတွေကိုဖတ်ရင်း မေးခွန်းများကို မိဘနှင့်ကလေးအတူတူ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးဖြေကြားမယ့် အဖြေတွေကို * မှားတယ်* ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်ပေးတာမျိုး ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုပိုအဆင်ပြေမယ် ဒီလိုထပ်ဖြည့်ပေးမယ်နော် ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းလေးတွေသုံးဖို့အကြံပြုပါတယ်။
KG , G1 ,G2 အတွက်ဖတ်ချင်ရင် အောက်ပါလင့်ခ်များမှာ ဝင်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ကလင့်ခ် credit ပါ။
တတိယတန်း ကျောင်းသားကိုင် စာအုပ်များကို pdf file အဖြစ် လိုချင်ကြလျှင် အောက်တွင်ပေးထားသော link တစ်ခုချင်းစီမှ မိမိတို့ လိုအပ်သော စာအုပ်များကို Download ရယူနိုင်ပါတယ်
တစ်ဘာသာချင်း download လုပ်လိုလျှင် အောက်ပါလင့်ခ်များတွင် ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
4. Grade(3) တတိယတန္း
အေျခခံပညာ G3 အတန္းကို တက္ေရာက္မယ့္ကေလးဟာ စာအေတာ္အသင့္ဖတ္တတ္နိုင္ပါျပီ။ ဒါ့ေၾကာင့္သင္ၾကားေရးအေတြ႔အႀကံဳမရွိေသာမိဘမ်ားအေနနဲ႔ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကိုလုပ္ေပးနိုင္ပါတယ္။
မိမိတို႔ကေလးကို သင့္ေလ်ာ္ရာ စာပိုဒ္အတိုေလးေတြဖတ္ခိုင္းၾကည့္ပါ။ ကေလးက မွန္မွန္ကန္ကန္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ဖတ္နိုင္ရင္
မွတ္သားစရာပံုျပင္တိုေလးေတြကို အသံထြက္ဖတ္ခိုင္းျပီး သား/သမီးဆိုရင္ေရာ ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္မလဲ ဆိုတဲ့ ေဆြးေနြးမႈေမးခြန္းေလးေတြေမးေပးနိုင္ပါတယ္။ ကေလးက မွန္မွန္ကန္ကန္ မဖတ္နိုင္ေသးရင္ G2 မွာ ေျပာခဲ့သလို စာဖတ္တတ္ဖို႔ အေလ့အက်င့္ေလးေတြလုပ္ေပးပါ။ ဒီလင့္ခ္မွာ ၀င္ၾကည့္ေပးပါ။
G3 အရြယ္ဟာ စာေကာင္းေကာင္းဖတ္နိုင္ဖို႕ လိုလာပါျပီ။ စာဖတ္တတ္ရုံမဟုတ္ပဲ ေဆြးေနြးမႈပုံစံေလးေတြပါထည့္လုပ္ေပးနိုင္ရင္ပိုေကာင္းပါတယ္။